Fandotoan'ny rano maloto | Fiaretana haran-dranomasina
Courses bebe kokoa
Ny taranja an-tserasera momba ny fandotoana rano fako dia natao hanampiana ireo mpitantana an-dranomasina hahatakatra ny loza ateraky ny fahalotoan'ny rano maloto amin'ny ranomasina sy ny fahasalaman'ny olombelona ary inona ny paikady sy vahaolana azo hanalefahana ny fahalotoan'ny rano maloto any an-dranomasina. Ity fampianarana an-tserasera mandeha ho azy ity dia ahitana siansa vaovao, fandalinana tranga ary fomba fitantanana voalaza ao amin'ny Fitaovana fandotoana rano maloto.
Fitsipika momba ny fampianarana
Lesona 1: ny fiantraikan'ny fandotoana rano maloto sy ny rafitra fitsaboana - mampahafantatra ny fomba hidiran'ny fandoto-drano maloto amin'ny tontolo iainana an-dranomasina sy ny vokatry ny loto sasany amin'ny fianan'ny olombelona sy ny ranomasina. Ity lesona ity dia manome koa topy maso ny rafi-pitsaboana rano maloto ampiasaina matetika, ao anatin'izany ny rafi-pitsaboana rano afovoany sy itsinjaram-pahefana.
Lesona 2: firesahana amin'ny fandotoana rano maloto - mamaritra ny fomba famolavolana programa fanaraha-maso kalitaon'ny rano hanampiana amin'ny famaritana ny fahalotoan'ny rano maloto; ary ny fomba fanatsarana ny vahaolana voajanahary, ny fanatsarana ny teknolojia momba ny rafitra fitsaboana, ary ny rafitra fanarenana loharano vaovao hanatsarana ny fitsaboana rano maloto sy ny kalitaon'ny rano. Ity lesona ity koa dia manome torolàlana momba ny fiaraha-miasa sy fifandraisana amin'ireo tompon'andraikitra sy vondrona hafa hanalefaka ny fahalotoan'ny rano maloto any an-dranomasina.
Teny azo ampiasaina
kitiho ny safidy etsy ambony hisoratana anarana
Mpitantana an-dranomasina sy mpitsabo